Betroka Olona 88 matin’ny tazomoka
Mahatratra 88 ny isan’ny matin’ny tazomoka ho an’ireo kaominina 22 any amin’ny distrikan’i Betroka, raha ny vaovao nambaran’ny Solombavambahoaka Nicolas Randrianasolo omaly hariva.
Antony ny tsy fahampian’ny fanafody hatrizay. Na mbola tsy misy aza ny coronavirus, dia niezaka ny CCO Covid-19 hiara-hisalahy hanampy ny olona any ambanivohitra, raha ny fampitam-baovao. Tsy nisy fanafody ho an’ireo 21 kaominina eny fa ny hatramin’ny teo amin’ny tanàn-dehibe. Ny sabotsy teo vao nisy fanafody tonga tany an-toerana. Nanao antso avo amin’ny hampitomboana hatrany ny fanafody io solombavambahoaka io. Efa nahatratra Hatrany amin’ny 500 latsaka kely moa ny isan’ny maty any amin’ny faritra atsimo noho ny tazomoka, saingy somary takon’ny fiatrehana ny coronavirus.